फोहोर फ्याँक्नेको पहिचान सीसीटीभीबाट – Maitri News
काठमाडौँ । अरूको आँखा छल्दै फोहोरको पोको बोकेर कता लाग्दै हुनुहुन्छ ? कतै बाटोघाटो, चौबाटोको मोड र छिमेकीका घरढोकाअगाडि फोहोरको पोको बिसाउने मनशाय त छैन ? यसो हो भने महानगरीय प्रहरी परिसर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी टोलीले तपाईंलाई सीसीटीभीबाट पहिचान गरी ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
प्रवक्ता सिंह भन्नुहुन्छ, “अब फोहोर फाल्नेलाई पटकैपिच्छे ५० हजार रुपियाँ जरिवाना हुन्छ । जडित सीसीटीभीबाट यस्ताको पहिचान गरेर घरडेरामै पुगेर कारबाही गरिन्छ । ” नेपाल प्रहरीले सीसीटीभी जडानका लागि बोलपत्र नै आह्वान गरिसकेको छ ।
Previous Previous post: साउन ८ गतेसम्म संसद् स्थगित
Next Next post: खण्डग्रास चन्द्रग्रहण